Abavuni bomhla abali-13 banike iwebhusayithi yakho ukujija Izidalwa ezikwi-Intanethi
13 Yenzelwe ngokuKhethekileyo abaKhethi beMihla yokuSabela
Yiba Isikhethi somhla esilungiselelwe kakuhle sibalulekile ukuze undwendwe lungachithi umzuzwana ekukhetheni umhla wokuzalwa okanye xa efuna ukufumana iodolo yemveliso asandukuyithenga kwi-eCommerce yethu. Ngesi sizathu, sikulethela umhla kunye nexesha lokukhetha kwiReact ezibonakaliswa kuyilo lwazo kunye namava omsebenzisi amahle.
1 Yenza izinto ezikhethiweyo ezininzi
2 Yenza uluhlu lwendalo
3 Imihla yokuPhathwa kweMveli
4 Isikhethi somhla weRC
5 Yenza iKhalenda
6 Isikhethi somhla sokuhamba kweselfowuni
7 Ikhalenda engapheliyo
8 React Imihla
9 Yenza into oyikhethayo yendalo
10 Isikhethi seReact elula
11 Igalelo lomzuzu
12 Thatha isenzo sokukhetha usuku
13 Umhla wokuchonga ReactJS
Yenza izinto ezikhethiweyo ezininzi
Le datepicker kwi React, ngaphandle kwe- uyilo olulungileyoIphawuleka ngokuvumela ukukhethwa kwemihla eliqela kwikhalenda elisinika yona. Ungayifumana idemo ukuze wazi ukuba i-React isikhethi siziphatha njani. Nantsi unayo indawo yayo Github.
Yenza uluhlu lwendalo
Un Isikhethi somhla kwiReact.js ephawuleka ngokulula kokusebenzisa kunye nendlela enokuthi yenziwe ngayo ngokwezifiso. Ilula ekukhulelweni kwayo, oku kuyimpumelelo enkulu ekubeni ngumhla kunye nexesha lokukhetha iwebhusayithi yakho.
Imihla yokuPhathwa kweMveli
Esi React umhla wokuchola ulandela ipateni efanayo neyangaphambili ukuguqula kwenye yezo ziboniswe kolu luhlu. Kunye nekhalenda, unokukhetha uluhlu lweentsuku oza kuzisebenzisa njengecebo lokucoca ulwelo. Olunye uhlobo lokuthabatha umhla wokuthabatha onalo.
Isikhethi somhla weRC
Unedemo yolu khetho lomhla weRC oqhubeka nokubonisa umgangatho omkhulu njengabanye. Enye yeenkcukacha zayo kukuba inikeza ithuba lokukhetha ixesha, ke yahlukile kwabanye kule meko. Amava amakhulu omsebenzisi kukunxibelelana okuhle njengomhla kunye nokukhetha ixesha kwiReact.js. Unayo apha Github yakho.
Apha sihambisa ngokupheleleyo ixesha, ukuhlala nomntu okhetha umhla kwiReact.js. Iyafana neyangaphambili ngomxholo ocacileyo, kodwa yahlukile ngokubonakala njengebhari enokuvulwa ukuze ukhethe umhla esiwufunayo. Nantsi unayo Github yakho ukuya kwikhowudi yemithombo endaweni yedemo.
Isikhethi somhla sokuhamba kweselfowuni
Olu khetho lomhla lunikezelwe kwiselfowuni kwiReact.js yahlukile kwezinye yobunzima obuncinci kakhulu. Iyabonakala ngaphandle kuyilo lwayo ngokukhetha izinto ezahlukeneyo zomhla ngevili ledijithali. Unayo Github yakho ukuze usondele kwikhowudi yayo yomthombo kwaye uyiphumeze kwiwebhusayithi yakho.
Olu khetho lomhla olungenasiphelo olwakhiwe ngeReact lubonakaliswa yimixholo, Inkxaso yebhodi yezitshixo, uluhlu lokhetho kunye nendawo. Olunye lolona khetho lubalaseleyo kuludwe lonke. Nantsi unayo Github yakho Lonke ulwazi olushiyekileyo emva kokuba uyonwabele idemo. Kwiphaneli uya kuba nalo lonke uthotho lwezinto onokukhetha kuzo ukuzama nganye nganye kwaye ufumane umbono olunge ngakumbi ngamathuba ayo.
Isikhethi somhla ku React esahlulahlulwe ngu zilungiselelwe iselfowuni kwaye oko kunikwa isimilo esihle kakhulu. Ikwanayo Github yakho ukuze wazi zonke iinkcukacha zayo kwaye uyise kwiwebhusayithi yakho. Unokhetho olwahlukileyo onokukhetha kulo ukuze kwidemo ungayilungiselela indlela yakho kwaye ngenxa yoko unokufumana okuninzi kuyo.
Yenza into oyikhethayo yendalo
Sincoma ukuba uhambe NguGithub wakhe ukuze wazi uyilo lo kukhetha umhla kwiReact. Singahlulahlula kuba Sebenzisa ii-API zeDathaPickerAndroid, iTimePickerAndroid kunye ne-DatePicker iOS. Ke ujongano lwayo luya kuvakala luqhelekile kuwe ukuba uqhele ukujongana nayo nayiphi na kwezi OSs kwizixhobo eziphathwayo. Ukufezekisa ukuyiphumeza kwi-app yazo kwezi nkqubo zimbini zikhankanyiweyo njenge-Android kunye ne-iOS.
Isikhethi seReact elula
Isikhethi somhla esilula kakhulu kwiReact.js onokufumana kuyo imizekelo yokusetyenziswa kwiwebhusayithi yayo yedemo. Sikwanayo Github yakho ukwazi ezinye iinkcukacha zolu khetho ulula kwiReact. Enye into enomdla ayisiyiyo kuphela yokulula, kodwa yayo iindlela ezahlukeneyo zokwenza ngokwezifiso ukunika iwebhusayithi yethu intle kakhulu kwaye ilula.
Omnye umntu okhetha umhla apho ukhetho lokukhetha ixesha longezwa, ke liza liphelele. Isebenza nge-momentjs kwaye uyilo luvela kwiwebhusayithi efanayo yeDribbble. Ngokuqinisekileyo uya kuyithanda uyilo lwayo kunye nobuhle obunika iwebhusayithi apho ifakiwe khona. Le yiGithub yakho ukuze ungaphoswa nantoni na ngomnye umzekelo obalaseleyo wento okhetha umhla kunye nexesha.
Thatha isenzo sokukhetha usuku
Esi sikhethi somhla ku React sibonakaliswe yi-9KB yayo kwi-gzipper, ngaphandle kokuba yiyo yenza ngokwezifiso kakuhle, ifumaneke, exhasa i-ARIA kwaye ayixhomekekanga kwinto engaphandle. Yenziwe ukuba ibe yeyasekhaya sithetha ukuba sinokukhetha ulwimi lwekhalenda ukuze iguqulelwe kulwimi lwethu. Olunye lwezona zikhethi zigqibeleleyo zolu luhlu lweReact kwaye lwenza kube nzima kuthi ukuba sithathe isigqibo sinye
Umhla wokuchonga ReactJS
Unedemo njengabanye ukwazi in situ okhethiweyo umhla ophawulwa sisixhobo sebar esiya kuthi xa ucofa uvule ikhalenda. Inokhetho lokumisa kwaye ikhetha umgangatho ophezulu kuyilo. Ngaba minimalist, ke inokudityaniswa kulo naluphi na uhlobo lwewebhusayithi. Unayo iGithub yakhe ukufumana ezinye iinkcukacha kwaye usebenzise ikhowudi njengoko uthanda kwiwebhusayithi yakho.
Sishiya olunye uluhlu, nangona ngeli xesha leefom kwiCSS ukuze i qalisa ukusukela ngoku kwaye unerefertoire efanelekileyo onokuyikhetha kolo hlobo lokhetho kwiwebhusayithi yakho.